इन्फ्रारेड कुकटप FAQ - Zhongshan Amor इलेक्ट्रिकल उपकरण कं, लिमिटेड
इन्फ्रारेड र इन्डक्शन कुकटपहरू बीच के भिन्नता छ
तपाईंले इन्फ्रारेड र इन्डक्शन कुकटपहरू बीच के भिन्नता छ भनेर अलमल्लमा पार्नुभएको हुन सक्छ ...। दुबै विकल्पहरू केहि समयको लागि हो, त्यसैले कुनै पनि भ्रम हटाउन मद्दतको लागि, आउनुहोस् हामी हेरौं र इन्फ्रारेड हट प्लेट बनाम प्रेरण तातो प्लेटको बारेमा छलफल गर्छौं र दुबै पकाउने विधिहरू कसरी काम गर्दछन्। हामी छलफल गर्नेछौं किन इन्फ्रारेड तातो छनौट र प्रयोग एक राम्रो र कम खर्चिलो विकल्प हो। र हामी इन्फ्रारेड कुकिंगको फाइदाको बारेमा छलफल गर्नेछौं। सबैभन्दा लोकप्रिय बेन्चटप इन्फ्रारेड ओभन हेर्न मन पराउनुहुन्छ?
इन्फ्रारेड पाक कला के हो?
इन्फ्रारेड कुकिंग स्वस्थ खाना पकाउने र पौष्टिक तत्वहरू समात्ने एक लाभकारी तरीका हो।
इन्फ्रारेड गर्मी हो
परम्परागत विधिहरू भन्दा धेरै खाना-3x छिटो पकाउनको लागि छिटो
गर्मी उत्पन्न गर्दैन र तपाईंको भान्साको कूलर राख्दछ
तपाईंको खाना धेरै समान रूपमा पकाउँछ, तातो वा चिसो दागहरू होइन
खानामा उच्च आर्द्रता सामग्री राख्दछ
कुकरहरू अत्यधिक पोर्टेबल हुन् - बेन्चटप कुकर, टोस्टर ओभन र सिरेमिक कुकटपहरू उपयुक्त छन्।
भान्छा, आरभीको, डु ,्गा, छात्रावास कोठाहरू, क्याम्पि।
इन्फ्रारेड BBQ हरूको प्रयोगको लागि कम गन्दा र सस्तोमा चलाउन सकिन्छ
इन्फ्रारेड कुकर ताप कसरी गर्छ?
इन्फ्रारेड कुकटपहरू क्षय-संरक्षित धातु डिशमा क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड तताउने दीपकबाट बनेका छन्। बत्तीहरू प्राय: उज्यालो कोइलाले घेरिएका हुन्छन् र उज्ज्वल तातो उत्सर्जनको लागि। यो उज्ज्वल तापले भाँडोमा प्रत्यक्ष इन्फ्रारेड तातो स्थानान्तरण गर्दछ। तपाईंले पाउनुहुनेछ इन्फ्रारेड कुकटपहरूसँग ठोस इलेक्ट्रिक कोइल्स भन्दा बढि times गुणा बढी दक्षता भन्दा बढि उर्जा क्षमता छ। इन्डक्शन कुकरहरूमा अवरक्त कुकरको फाइदा: कुनै पनि भाँडा र प्यानहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रेरणा कुकटपहरूको साथ, तपाईंलाई विशेष कुकवेयरको आवश्यक पर्दछ।
बिल बेस्टले पहिलो ग्यास-संचालित इन्फ्रारेड बर्नर १ 60's० को शुरुमा आविष्कार गरे। बिल थर्मल ईन्जिनियरि Corporation कर्पोरेशनका संस्थापक थिए र उनको अवरक्त बर्नरलाई पेटन्ट दिए। यो पहिलो पटक कारखाना र उद्योगहरूमा प्रयोग गरिएको थियो जस्तै टायर उत्पादन कारखाना र ठूला ओभनहरू द्रुत पार्ने सवारी साधन पेन्टमा।
१ 1980 s० को दशकमा, सिरेमिक इन्फ्रारेड ग्रिल बिल सर्वश्रेष्ठले आविष्कार गरिसकेका थिए। जब उनले आफ्नो सिरेमिक इन्फ्रारेड बर्नर आविष्कार आफैंले बनाएको बार्बेक्यु ग्रेरेटमा थपे, उनले इन्फ्रारेड तातो खाना पकाएको खाना छिटो फेला पारे र उच्च ओसिलो स्तर बनाए।
इन्फ्रारेड ग्रिलहरूले कसरी काम गर्दछ?
इन्फ्रारेड गर्मी सधै अवस्थित छ। इन्फ्रारेड ओभनले तिनीहरूको नाम टावर इन्फ्रारेड हीटिंग एलिमेन्टहरूबाट प्राप्त गर्दछ जुन उनीहरूको तताउने असेंब्लीको कोरमा उपस्थित हुन्छन्। यी तत्वहरू तातो चर्को गर्मी बनाउन जो खाना मा हस्तान्तरण गर्दछ।
अब तपाईको सामान्य कोइला वा ग्यासमा सञ्चालित ग्रिलमा, ग्रिल कोइला वा ग्यास जलाएर तातिन्छ जुन पछि वायुको प्रयोग गरी खाना गरम गर्दछ। इन्फ्रारेड ग्रिलहरू बिभिन्न किसिमले काम गर्दछन्। तिनीहरूले एक सतह तात्न इलेक्ट्रिक वा ग्यास तत्त्वहरू प्रयोग गर्छन् जसले त्यसपछि प्लेट, कटोरा वा ग्रिलमा रहेको खानामा सिधा इन्फ्रारेड तरंगहरू बाहिर निकाल्दछ।
प्रेरण पकाउने भनेको के हो?
प्रेरण पकाउने खाना तताउने एक अपेक्षाकृत नयाँ विधि हो। इण्डक्शन कुकटप्सले भाँडो तताउन तापीय चालनको विरोधमा इलेक्ट्रोमग्नेट प्रयोग गर्दछ। यी कुकटपहरूले कुनै तताउने तत्त्वहरू ताप प्रसारण गर्न प्रयोग गर्दैनन् तर सिधा भाँडामा सिसा ताप्दछन् ग्लास कुकटप सतह मुनिको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्रको साथ। विद्युतचुम्बकीय क्षेत्रले प्रत्यक्ष चुम्बकीय कुकवेयरमा हालै स्थानान्तरण गर्दछ, यसले तातो पार्छ - जुन तपाईंको भाँडो वा प्यान हुन सक्छ।
यसको फाइदा तात्कालिक तापमान नियन्त्रणको साथ धेरै चाँडो उच्च तापक्रममा पुग्नु हो। इन्डक्शन कुकटपको उपभोक्ताका लागि धेरै फाइदाहरू छन्। यी मध्ये एउटा कुकटप तातो हुँदैन, भान्साको घरैमा जलाउने सम्भावना कम गर्दछ।
कसरी प्रेरण पकाउने काम गर्दछ?
प्रेरण कुकर खाना पकाउँने तल राखिएको तामाको तारले बनेको हुन्छ र त्यसपछि एक चुम्बकीय प्रवाह तार मार्फत पार गरिन्छ। वैकल्पिक वर्तमानको मतलब केवल उल्टो दिशातिर रहन्छ। यस वर्तमानले एक अस्थिर चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गर्दछ जुन अप्रत्यक्ष रूपमा तातो उत्पादन गर्दछ।
तपाईं वास्तवमै काँचको माथि आफ्नो हात राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईं केहि महसुस गर्नुहुन्न। तपाईको हातलाई कहिल्यै नराक्नुहोस् जुन भर्खरको खाना पकाउन प्रयोग गरिएको थियो किनभने यो तातो हुनेछ!
प्रेरणा कुकरका लागि उपयुक्त कुकवेयर फ्रोम्याग्नेटिक धातुहरू जस्तै कास्ट फलाम वा स्टेनलेस स्टीलबाट बनेका हुन्छन्। तपाइँलाई फेरोमेग्नेटिक डिस्क, तामा, गिलास, एल्युमिनियम, र गैर चुम्बकीय, स्टेनलेस स्टील्स प्रयोग गर्न सकिन्छ।
इन्फ्रारेड पाक कला किन राम्रो छ? इन्फ्रारेड हट प्लेट VS प्रेरण
मानिसहरूले प्राय: "इन्फ्रारेड तातो प्लेट बनाम प्रेरण" को प्रश्न सोध्छन् जब यो पावर प्रयोगको कुरा आउँदछ। इन्फ्रारेड कुकरहरूले अरू कुनै पनि प्रकारका कुकरहरू वा ग्रिलहरू भन्दा करीव १/3 कम पावर प्रयोग गर्दछन्। इन्फ्रारेड बर्नर यति छिटो तातो, तपाईंको नियमित ग्रिल वा कुकर भन्दा अधिक तापमान उत्पादन। केही इन्फ्रारेड कुकरहरू seconds० सेकेन्डमा 80 80। डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्षम छन् र दुई मिनेटमा तपाईंको मासु पकाउन सक्दछन्। त्यो अत्यन्त छिटो छ।
इन्फ्रारेड कुकरहरू र BBQ ग्रिलहरू सफा गर्न धेरै सजिलो छ। पछिल्लो पटक तपाईले बर्नर ग्रिल वा कोलकोल ग्रिल प्रयोग गरेको सबै गडबडी बारे सोच्नुहोस्। सबै splatters कि सफा गर्नु पर्ने थियो…। एक इन्फ्रारेड बीबीक्यूमा सिरेमिक लेपित एलिमेन्टहरू केवल तल खाली गर्न आवश्यक हुन्छ र एउटा बेन्चटप कुकरको कचौरा डिशवॉशरमा जान्छ।
इन्फ्रारेड पाक को फाइदा?
इन्फ्रारेड कुकिंगले गर्मीलाई पकाउने सतहमा समान रूपमा वितरण गरिएको सुनिश्चित गर्दछ। उज्ज्वल तातो समान रूपमा तपाइँको खाना प्रवेश र नमी सामग्री उच्च रहन सुनिश्चित गर्दछ।
इन्फ्रारेड कुकरहरू एकदम चाँडो तातो हुन्छन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि खानालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र आवश्यक परेको बेला गर्मी कम गर्नुहोस्। तपाईंले भिन्न तापमान सेटिंग्सको साथ अवरक्त कुकर चयन गर्नुपर्छ।
वातावरण को लागी राम्रो छ
इन्फ्रारेड कुकर र ग्रिलहरूले तपाईंको बिजुली, ग्यास वा कोइला ग्रिल भन्दा करीव percent० प्रतिशत कम ईन्धनको प्रयोग गर्दछ। यसले तपाइँको पैसा बचत गर्दछ र यसको फलस्वरूप वातावरणलाई मद्दत गर्दछ। कुन inf इन्फ्रारेड ग्रिलहरू यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय छन् पत्ता लगाउनुहोस्
किनभने इन्फ्रारेड ग्रिलहरू सब भन्दा छिटो तातो हुन्छन्, तिनीहरूले चाँडो पकाउँदछन्। तपाईं बार्बेक्यु ग्रिल गर्न सक्नुहुन्छ, मासु भुटेको, खाना पकाउन र तपाईं आफूले चाहेको सबै चीजहरू नियमित कुकर भन्दा3पटक छिटो गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्फ्रारेड कूकरहरू कत्तिको चाँडो हुन्छन्?
इन्फ्रारेड कुकरहरू seconds० सेकेन्डमा degrees०० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जान सक्छ। तिनीहरू कति छिटो छ भनेर। मोडेल र कोर्सको प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाईं केहि ढिलो मोडेलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोट गर्नुहोस् कि इन्फ्रारेडको साथ तातो स्थानान्तरणको सम्पूर्ण बिन्दु गतिको कारण हो।
ग्यास बर्नर र कोइला कुकरलाई तपाईंको खाना पकाउने भाँडोमा तातो हुनु आवश्यक पर्दछ र त्यसपछि तापक्रम बढ्न अघि भाँडा तातो हुने प्रतीक्षा गर्नुहोस्। इन्फ्रारेड सतहहरूले तपाईंको खाना पकाउने भाँडोमा चाँडो भन्दा चाँडो तातो लागू गर्नुहोस् र तपाईंको खानालाई क्षतिबाट बचाउनुहोस्। केवल १० मिनेटमा बार्बेक्यु पकाउने कल्पना गर्नुहोस् र यसलाई सँधै स्वादिष्ट बनाउनुहोस्। तपाईं चारकोल ग्रिलहरू पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ
के तपाईंलाई विशेष उपकरण चाहिएको छ?
हामीले विशेष कुकवेयरको आवश्यकता पर्दैन जस्तो हामीले उल्लेख गर्यौं। केवल नियमित कुकरहरू जस्तै तपाईले धेरै सामानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्न सक्दछ… .. जस्तै तपाईंको कुकरको लागि विशेष बाक्लो गिलास भाँडाहरू।
इन्फ्रारेड र इन्डक्शन कुकटप्स बीचको भिन्नता के निष्कर्ष
इन्फ्रारेड पाक कला र प्रेरण खाना पकाने दुबै खाना पकाने को महान विधि हो। इन्फ्रारेडले अझ बढी फाइदाहरू प्रदान गर्दछ किनकि तपाईंको खाना खरानी वा धुवाँको साथ तपाईंको खाना नछोडी पनी छिटो पकाइन्छ। इन्फ्रारेड कुकरहरू वातावरणको लागि पनि उत्कृष्ट छ - हामीलाई तातो उत्पादन गर्न कम जीवाश्म ईन्धन प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।